Sawirro:- Gaas Oo u Ambabaxay Dalka Talyaaniga. – SBC
Sawirro:- Gaas Oo u Ambabaxay Dalka Talyaaniga.
Posted by SBC Editor on May 2, 2015 Comments
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 2-5-2015 u ambabaxay Dalka Talyaaniga oo uu ka helay casumaad rasmi ah.
Garoonka diyaaradaha ee magaalo madaxda Puntland ee Garoowe ayaa waxaa madaxweynaha ku sagootiyey Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey, Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire, Wasiiro, xildhibaano , haween, dhalinyaro iyo masuuliyiin kale.
Cutubyo katirsan ciidanka iyo kooxda baambayda Puntland ayaa salaan sharaf siiyey Madaxweynaha , kadibna waxaa uu si kal iyo laab ah ugacan qaaday madaxdii iyo dadweynihii kala duwanaa ee Garoonka ku sagootinayey.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo warbaahinta kula hadlay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Garoowe ayaa sheegay in madaxda dalka Talyaaniga uu kala soo hadli doono mashaariicda horumarinta Puntland, kuwa hada ay ka fuliyaan iyo sidookale mashaariic cusub oo horleh oo laga fulindoono Puntland, kuwaas oo lagu horumarinayo Puntland.
” Waxaan rajeyn in mashaariicdaasi waxbadan ka bedali doonaan wejiga Puntland una soo kordhin doonaan horumar iyo nabada Puntland kajira , guul iyo kheyr ayaan ka rajeyn in uu noogu soo dhammaado ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku howlan sidii uu Puntland u horumarin lahaa , booqashooyinka uu madaxweynuhu ku tago dalalka aan saaxiibka nahay waxay soo kordhiyaan in madax kala duwan oo caalamka ah uu soo bandhigo horumarka iyo nabad-gelyada Puntland kajirta si ay ugu dhiiradaan inay ka fuliyaan mashaariic wax ku ool ah.